Showing ५१-६० of ३७५ items.
बाल कविताः आमा
हिन्दूहरूले पूजा गर्ने भगवान एउटा राम हुन्संसारको सर्वश्रेष्ठ मान्छेकेवल एउटी आमा हुन् । नौ महिना दुःखमा बसिन्गर्भमा आफ्नो राखेरसहन नसकिने पीडा सहिन्प्राण आफ्नो मानेर । कस्तो रहेछ संसार भन्नेयी आमाले देखाइन्खुशीको यो हो दिन भनेरभोज भतेर गराइन् ।हात मेरो समाएरविस्तारै हिड्न सिकाइन्आमाले त पहिलो शब्दआमा भन्न सिकाइन्। नाकबाट निस्कने सिँगानआफ्नै हातले पुच्छिन्मलाई केही भएमाआमा आफैं रुन्छिन् । मेरी छोरी म जस्तै ज्ञानीभनेर आमा हाँस्थिन्मेरी छोरी परि जस्तै सुन्दरीभनेर आमा गीत गाउँथिन् ।स्कुल जाने बेलामास्कुल पनि पठाउँथिन्गृहकार्य पूरा नगरेमाआमा मल
प्रकाशित मितिः आश्विन २६, २०७६
भरतपुर । २०६२ सालको असोज महिना हुनुपर्छ, म ९ वर्षको पुग्न लागेको थिएँ । शरद ऋतु सुरु भइसकेको थियो । बिहानी समयमा चराहरूको चिरबिर, हलुका र चिसोचिसो हावा अनि खुलेको आकाश, यी कुरा मलाई अति प्रिय लाग्न थालेका थिए । सायद यही मौसममा मेरो जन्म भएको भएर पनि होला, मलाई वर्षका अरु समयभन्दा यो समय अलि बढि नै मन पर्ने गरेको । आँगनमा थरीथरीका फूल फुल्दै थिए । आँगनमा निस्किएर लामो श्वास लिँदा फूलको बासना फोक्सोसम्मै पुगी आनन्दता प्रदान गर्दथ्यो ।mmmहाम्रो घर चितवनमा भए पनि बुबाको जागिरले गर्दा धरान डेरामा बस्दै आएका थियौं । असोज महिनाको एक दिन, म र भाइ स्कूलबाट खुशी हुँदै घर पुग्यौं (धरान डेरामा
प्रकाशित मितिः आश्विन २२, २०७६
आउ ! हामी मान्छेको मासु खाउँ
भेडा-खसीको गर्धनमायाले छिनालेरमासु-मासुको कवाफ,साँप्राको सुकुटी रआन्द्राको भुटन खाँदैजिब्रो पड्काउनेहरुलाईदुईचार आवारा कुकुरलाईद्वन्द्वकालमा मास्टर कुटेरलघारे झैँ लघार्दाकिन छाती पोल्ने ? चर्दै रमाउँदै गरेकाकुखुरा, हाँसकागर्धन निमोठेरसेकुवा र चिकेन चिल्लीलेग पिस र विङ्सलेपर्व मनाउनेहरुलाईदुईचार छाडा कुकुरहरुलाईगाडीले किचेर मार्दाकिन सकस पर्ने ? अबोध जिवजन्तुकोमासुले लागेको बोसोले हाम्रोदिमाग पनि बोधो भैसक्यो क्यार,नत्र एउटालाई मार्दा चाँडअर्को तेसै गरि मर्दाकत्रो भैलोभाँड ।जीवनको नि अलगअलगमोल हुन्छ यो मानवताको बजारमा? राँगाको मासुको म:म: छोएला, कचेलापरेवाको सुप, बोकाको राजखानी ।यी जिब्रो रस
प्रकाशित मितिः आश्विन १९, २०७६
५७१ पटक पढिएको
विमल स्मृतिमा कविता महोत्सव
धरान / कवि विमल गुरुङको ४९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा २९ औं राष्ट्रिय कविता महोत्सव गर्ने भएको छ । कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयले हरेक वर्षझैँ यसवर्ष पनि कात्तिक १९ गते महोत्सव गर्ने भएको हो । पुस्तकालयका अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार महोत्सवमा पठाइएको कविताहरुलाई दुई चरणको निर्णयमार्फत् पुरस्कृत गरिने भएको छ । गत वर्ष २ सयभन्दा बढी कविताहरु प्राप्त भएका थिए । यसवर्ष पनि उक्त संख्यामै कविताहरु प्राप्त हुने विश्वास आयोजकले लिएको छ । महोत्सवमा छनौट भएका टप १० कवितालाई प्रतियोगीहरुले नै वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको पुस्तकालयका सचिव गणेशप्रसाद तिम्सिनाले बताए । महोत्सव विजेताले नगद २०
प्रकाशित मितिः आश्विन १८, २०७६
प्रत्यक बर्ष दशैंको आगमन सँगै दशैं बजारको चहलपहल र बसको टिकट बुक गर्नेको घुईचो पनि बढेको देख्दा एक किसीमको रमाईलो अनुभव हुन्छ । आज पनि याद आउँछ दशैंमा लिङ्गे पिंग गाउँघर तिर खेलेको । आजभोलि दशैंको परिभाषा नै फेरिएको छ । हामी नेपालीको सबैभन्दा ठूलो महान चाँड वर्षमा एक पटक मात्र आउँछ । सबै देश विदेश छरिएर रहेको आफन्त, साथीभाईहरुसँग भेटघाट हुने तथा वर्षभरि भोगेका तीतामीठा अनुभवहरु साटासाट गरी खानपान गर्ने, उपहारहरु आदान प्रदान गर्ने अमुल्य समय हो दशैं । असत्य माथि सत्यको विजय भएको, देवताहरुको रक्षा गर्नको लागि दुर्गामाताले महिसासुरलाई अन्त्य गरेको दिन हो दशैं । दशैं पर्व मात्र होईन, यो नेपाली स
प्रदेश सरकारले एकेडेमी बनाउँने
विराटनगर / प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शरेधन राईले प्रगतीशिल समाज निर्माणका लागि सरकारले एकेडेमी बनाउन लागेको बताएका छन् । बौद्धिक सरोकार केन्द्रले विराटनगरमा सोमबार आयोजना गरको प्राध्यापक डाक्टर गणेश क्षेत्रीले लेखेको ‘ओझेलका यथार्थहरू’ पुस्तकको बिमोचन गर्दै मुख्य मन्त्री शेरधन राईले यस्तो बताका हुन् । उनले सचेतनामुलक समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रगतिशिल एकेडेमी बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । प्रदेश स्तरिय एकेडेमीमा प्रतिष्ठित बिद्धानहरुलाई सहभागी गराएर समाजमा प्रगतिशिल साँस्कृतिक चेतनाको बिकास गराउने मुख्य मन्त्री राईले बताए । उनले हजारौ बर्षदेखी जकडिएर बसेको अन्